Wareysi: Gudoomiyaha Gudiga Amniga Qaranka oo ka hadlay qorshayaashooda - Axadle – Axadle
Wareysi: Gudoomiyaha Gudiga Amniga Qaranka oo ka hadlay qorshayaashooda – Axadle
By Abdiwahab Ahmed	 On May 5, 2021
Muqdisho (Axadle) – Guddi saraakiil ah oo ay soo magacaabeen ciidamadii dhawaan soo galay Caasimadda Muqdisho isla markaana difaacyo ka sameystay degmooyinka C / casiis, Hodan iyo Howlwadaag ayaa shuruud uga dhigay inay dib ugu laabtaan xeryahooda.
Guddigan oo ka kooban saddex jeneraal iyo afar kornayl ayaa ka dalbaday madaxweyne Farmaajo inuu mas’uuliyadda amniga dalka ku wareejiyo marka uu waqtigiisa dhammaado, iyagoo ku eedeeyay inuu wajahayo ciidamada xoogga dalka.
Gaashaanle Diini Axmed Rooble, oo ah afhayeenka guddiga militariga ee taraafikada u diraya raiisel wasaaraha, wuxuu u sheegay BBC inay sii joogi doonaan difaac ahaan magaalada, halka xalka koowaad uu helayo waxyaabihii ay ka mudaharaadeen.
“Waxaan marwalba ilaalinay ku dhaqanka sharciga iyo ku dhaqanka sharciga, Soomaaliya waxay leedahay dastuur la isku raacay, markii aan aragnay in lagu tuntay sharciyada dalka waxaan go’aansanay inaan badbaadino dowlada Soomaaliya, ujeedkeenu wuxuu ahaa kahortaga mudo kordhinta. Ku noqo miiska wada hadalka, ayuu yiri Afhayeenka Amniga Qaranka Gaashaanle Diini Rooble Axmed.
Afhayeen u hadlay Guddiga ayaa sidoo kale ku andacooday in Farmaajo uu qalalaase ka dhex abuuray ciidanka isla markaana ay tahay inuu ka tanaasulo mas’uuliyadda ciidanka qaranka.
“Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday kamuu hadal muddo kordhintii ay ummaddu rajeyneysay. “Madaxweynaha mas’uul kama sii ahaan karo mas’uuliyadda amniga dalka, maxaa yeelay wuxuu sababay inay isku dhacaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, marka waxaan sii joogi doonnaa Muqdisho inta uu dalku ku soo noqonayo sidii caadiga ahayd,” ayuu raaciyay. Lagu daray sarkaalkan.
Markii la weydiiyay sababta ay uga qaadan waayeen amarka ka soo baxay Ra’iisul Wasaaraha ee ahaa inay dib ugu laabtaan xeryahooda, wuxuu yiri, “Raiisel Wasaaraha la magacaabay, waxaan maqlay eray istiraatiijiyad leh, laakiin shalay markii aan joogay magaalada Geleynay, waxay muhiimadeenuna” Sababta aan u galnay magaalada shalay waxay ahayd maxaa yeelay wali sharciyo ayaa jira. “
Wareysiga hoosta ka dhageyso
Abdiwahab Ahmed 977 posts
African Union, UN blamed for violence in Tigray area, Ethiopia